नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : अहिलेका लोकतान्त्रिक नेताहरुले कसैले हामीले मारेकै हौ, सक्छस् हामीलाई थुनेर हेर भनेर चुनौती दिए ! सिंगो नेपालको इतिहासमा हाम्रो देशको इज्जतमा धब्बा !
अहिलेका लोकतान्त्रिक नेताहरुले कसैले हामीले मारेकै हौ, सक्छस् हामीलाई थुनेर हेर भनेर चुनौती दिए ! सिंगो नेपालको इतिहासमा हाम्रो देशको इज्जतमा धब्बा !
नेपालका चर्चित अधिकारकर्मी एवं इन्सेकका अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले नन्दप्रसादको घटनालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने बताए
नेपाल अधिराज्य बने यता राणाशासन, पञ्चायतकाल र बहुदलीय प्रजातान्त्रिक शासनमा नभएको घटना संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक नेपालमा भयो । सिंगो नेपालको इतिहासमा हाम्रो देशको इज्जतमा धब्बा लागेको छ । ३ सय ३३ दिन आमरण अनशन बसेर नेपालमा आजसम्म कसैको ज्यान गएको थिएन । राणा र पञ्चहरुजस्ता निरकुंश शासकहरुले पनि अनशनकारीसँग वार्ता गरी अनशन तोडाएका थिए । तर, अहिलेका लोकतान्त्रिक नेताहरुले कसैले हामीले मारेकै हौ, सक्छस् हामीलाई थुनेर हेर भनेर चुनौती दिए । कसैले ती अनशनकारीलाई बचाउन सक्दिन भनेर पहिल्यै घोषणा गरिदिए । म यतिबेला सम्झिरहेको छु, सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली, माधव नेपाल, खिलराज रेग्मी र शेरबहादुर देउवा लगायतका नेताहरुलाई, उहाँहरु सबैले नन्दप्रसादजीलाई न्याय दिने बताउनुभएको थियो । तर, नन्दप्रसाद सँधै भन्नुहुन्थ्यो, मलाई तपाईंहरुले केही गर्न पर्दैन, मेरो छोरा कृष्णप्रसादको हत्याका विषयमा अभियोजन सुरु गर्नुस, नत्र मलाई
तपाईंको विश्वास छैन भनेर ।
छ महिना अघि कनकमणि दीक्षित र म उपप्रधान एवं गृहमन्त्री वामदेव गौतमलाई भेट्न गएका थियौं । त्यतिबेला उहाँले ‘म नन्दप्रसाद र गंगामायालाई त बचाउन सक्दिन, तर अपराधीलाई कारबाही चाँहि गर्छु’ भन्नुभएको थियो । वामदेवजीको पहिलो वचन पूरा भएको छ । म उहाँलाई सोध्न चाहन्छु– उहाँको दोस्रो वचनचाँहि कहिले पूरा हुन्छ ?
म प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई सम्झन चाहन्छु, अहिले अमेरिकामा रहेका प्रधानमन्त्री कोइरालाले संयुक्त राष्ट्रसंघको मञ्चमा उभिएर नेपालको न्याय र मानवअधिकारको विषयमा कस्तो मन्तव्य दिनुहोला ? र, त्यसलाई हामीले कसरी विश्वास गरौंला ।
एकीकृत नेकपा माओवादीका नेताहरुलाई चाँहि म बधाई दिन चाहन्छु । किनभने यो धर्तीमा उहाँहरुलाई कुनै पनि कानुन लाग्दैन । तर, माओवादी लगायत सबै राजनीतिक दलले निधार खुम्च्याएर सोच्नुपर्छ कि अब आइन्दा यो देशमा राजनीतिक दलको छाता ओढेर जस्तोसुकै जघन्य अपराध गर्न पाइन्छ ?
प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्नुहुन्छ कि हुन्न भन्ने दैनिक नेपालको प्रश्नमा प्याकुरेलले यसो भन्नुभयो– राजनीतिमा राजीनामा त्यस्तो देशमा मागिन्छ, जहाँ नैतिकता हुन्छ । तर, जुन देशमा नैतिकता स्खलित भएको छ, त्यो देशमा नैतिक प्रश्नले कुनै महत्व राख्दैन।
३ सय ३३ दिन आमरण अनशन बस्दा पनि न्याय नपाएर जीवनलिला गुमाएका नन्दप्रसाद अधिकारीको शव बुझिदिने मानिस पनि भेटिएनन् ।
परिवारका कोही मानिस पनि नभएका कारण उनका शव वीर अस्पतालले नै शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा लगेर छाडिदिएको छ ।
नन्दप्रसादका कान्छा छोराको तत्कालिन विद्रोही माओवादीले क्रुरतापूर्वक हत्या गरेका थिए भने जेठा छोरा नुरप्रसाद अधिकारी अहिले अर्धभुमिगत झैं अवस्थामा छन् । नन्दप्रसादसँगै आमरण अनसन सुरु गरेकी गंगामाया पनि अन्तिम अवस्थामा छिन् ।
जवाफदेही निगरानी समितिका अध्यक्ष एवं अधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेलका अनुसार नन्दप्रसादको अन्त्येष्टि समेत अन्यौलमा परेको छ ।
प्याकुरेलले नन्दप्रसादको मृत्युलाई सत्याग्रहको हत्याको संज्ञा दिनुभयो । ‘सरकारको यो लापरवाहीको भत्सर्ना गर्दै नन्दप्रसादले उठाएको न्यायको झण्डालाई हामी मानव अधिकारकर्मीहरु झुक्न दिने छैनौ ।,’ प्याकुरेलले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारको प्रत्यक्ष निगरानी भएको नन्दप्रसादको मृत्युलाई सरकार न्याय प्रति चरम उदासिन छ भन्ने स्पष्छ भएको छ । नन्दप्रसादसंगै अनसनमा रहेकी उनकी श्रीमति गंगामायाको अवस्था पनि अत्यन्त नाजुक रहेकोले उनीहरुले उठाएको न्यायको मागलाई तत्काल सम्वोधन गरी अझै अनसरनरत गंगामायाको जीवन रक्षाको पहल गर्न हामी सरकारसंग जोडदार माग गर्दछौ ।’
नन्दप्रसादको मुत्युपछि सिंगो मानवअधिकारवादी समुदाय दुःखी भएको उहाँले बताउनुभयो ।
- Bishwa Bandhu Prasai
अल बिदा मेरो अधिकारीहरुको विदेश मेरो देशमा स्वयम्भु अन्धो छ , पशुपति लाटो छ रे अनि. सगरमाथा बैरो छ रे | जनयुद्धले १७००० हजार बलि चदाको भुमि र राजतन्त्र मारिएको देश रे , मारिएकाले न्याय नपाको देश रे ,लोकतन्त्र र संबिधान कोशी नदीमा बगेको देश, राजनीति उत्तर र दक्षिणको दलाल बनेको देश रे , भ्रस्टाचार व्यापार भाको देश ,जनयुद्धले पेट पाल्न १/४ विदेश पठाउने देश रे , गणतन्त्रले कैद गरेको मेरो देश , प्रजातान्त्रीक अभ्यास बिर्सेको देश रे | अब त मैले होइन नभन्ने ठाउँ नै नभाको अन्यायले जितेको देश माया गर्दा गर्दै पनि बिछोडिनु परेको मेरो प्यारो देश , शान्ति र न्यायले आत्महत्या गरेको देश खै अरु के भनौ लेखौ , सबै अधिकारीहरु जस्तै मरिरहेको देश जिउदै जलिरहेछ मेरो देश, दमकल नभाको मेरो प्यारो देश खै कहिले तिमि आउछौ र जिम्मा लगाऊ मेरो प्यारो देश ..!
काठमाडौँ चितवन । दस वर्षअघि मारिएका छोरा कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्यामा संलग्नलाई कारबाही माग गर्दागर्दै नन्दप्रसादले सोमबार अनशनरत अवस्थामै ज्यान गुमाए। उनले अनशन सुरु गरेपछि हत्या प्रकरणमा मुछिएकालाई मुद्दा चलाउने काम भए पनि किनारा भने लागेको छैन । कृष्णप्रसादलाई चितवनको बकुलहरचोकबाट अपहरण गर्नेमा तीन जना संलग्न रहेको र गोली हानी हत्या गर्ने रुद्र आचार्य भएको प्रहरीको पछिल्लो अनुसन्धानले खुलाएको छ। आचार्य हाल उत्तरी आयरल्यान्डमा रहेको प्रहरी दाबी छ।
अनुसन्धानअनुसार आचार्यसहित ऋषिराम लामिछाने र ‘अटल’ भनिने मदन पौडेल हत्यामा संलग्न थिए। यी तीनै जना माओवादी कार्यकर्ता हुन्। लामिछाने र पौडेलको द्वन्द्व क्रममा सुरक्षा कारबाहीमा मृत्यु भइसकेको प्रहरीले जनाएको छ। यही निष्कर्षका आधारमा प्रहरीले आयरल्यान्डमा रहेका आचार्यलाई पक्राउ गर्न सहयोग माग्दै २०७० फागुन २१ गते ‘डिफ्युजन’ नोटिस जारी गरेको थियो। यसको प्रत्युत्तरमा बेलायतस्थित इन्टरपोलको एनसिबीले अदालतको नोटिस मागेको थियो। यसअनुसार चितवन जिल्ला अदालतले पक्राउ आदेश जारी गरिसकेको छ। उक्त आदेश नेपालस्थित एनसिबीले बेलायत एनसिबीलाई पठाइसकेको स्रोतले बतायो।
२०५७ मा माओवादीमा लागेका चितवन, रत्ननगर नगरपालिका–८ का आचार्य माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि २०६६ मा श्रीमतीसँगै ‘डिपेन्डेन्ट’ भिसामा बेलायत गएको प्रहरीको भनाइ छ। जिल्ला अदालत चितवनमा दर्ता भएको मुद्दामा आचार्यलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ। आचार्यसहित पक्राउ नपरेका ८ जनाका हकमा मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको १३ (१) अनुसार घटनामा संलग्न देखिएको अभियोगमा कानुनी प्रक्रिया जारी छ।
यसबीच नन्दप्रसाद र गंगामायाको अनशन तोडाउन पटकपटक प्रयास भए पनि उनीहरू मानेका थिएनन्। दाजु नुरप्रसादले अनशन तोडेबापत राज्यसँग ठुलो रकम माग गरेको पनि चर्चामा आएको थियो।
यो हत्याकाण्ड माओवादी द्वन्द्व बेला २०६१ जेठ २४ मा भएको थियो। त्यस दिन १८ वर्षीय कृष्णप्रसाद एसएलसी परीक्षा दिएर हजुरबा–हजुरआमा भेट्न गोरखा, फुजेलबाट चितवन आएका थिए। राति ८ बजेतिर नम्बर खुल्न नसकेको एउटा मोटरसाइकल हुइकिँदै आएर उनको सामुन्ने रोकियो। मोटरसाइकलमा तीन जना सवार थिए। तिनले कृष्णप्रसादलाई आफ्नो कब्जामा लिए। त्यसै रात चितवन नगरपालिका–८ को बकुलहरचोकमा गोली हानेर उनको हत्या गरियो।
दोस्रो दिन नै कृष्णप्रसादका बाबु नन्दप्रसादले ‘मोटरसाइकलमा आएका तीन जना अज्ञात व्यक्तिले हत्या गरेको’ भन्दै कर्तव्य ज्यानअन्तर्गत घटनामा संलग्नको खोजतलास र कारबाही माग गर्दै जाहेरी दिए। उनले कसैको नाम किटान गरेनन्। प्रहरीले उनको यो जाहेरीका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाएन।
अनुसन्धान सुरुआत त्यसपछि मात्र भयो, जब कृष्णप्रसादका दाजु नुरप्रसादले १८ महिनापछि २०६२ मङ्सिर २६ गते ‘भाइको हत्यामा संलग्न’ भन्दै ११ जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी दिए। तीमध्ये नौ जना उनका आफन्त हुन्। प्रहरीले त्यही जाहेरीलाई अनुसन्धानको मुख्य आधार बनायो।
जाहेरीकर्ता नुरप्रसाद अंश विवादका कारण आफ्नो भाइ मारिएको दाबी गर्छन्। नन्दप्रसादका दुई भाइमध्ये कान्छाको नाम ठाकुर हो, माइलाको मृत्यु भइसकेको छ। माइली आमाले माओवादी कार्यकर्ता लगाएर भाइको हत्या गराएको नुरप्रसादको तर्क छ। त्यही आधारमा उनले माइली काकी र फुपूलाई समेत आरोपित बनाएका छन्।
अधिकारी परिवारमा अंश विवाद रहेको स्थानीय पनि स्वीकार गर्छन्। तर त्यही विवादमा माइली आमाको पक्ष लिनेलाई नुरप्रसादले भाइको हत्यामा आरोपित बनाएर फसाएको उनीहरूको भनाइ छ।
नुरप्रसादको जाहेरीमा आतंककारी तथा विध्वंसात्मक ऐनअनुसार कारबाही माग गरिएको थियो। हत्याको अभियोजनका लागि सुरुमा सरकारी वकिलको कार्यालयले यसैलाई कानुनी जटिलताका रूपमा विश्लेषण गरेको थियो। २०६२/६३ को राजनीतिक परिर्वतनपछि बनेको सरकारले राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा आएका सबै कानुन निस्त्रि्कय बनाउँदा आतंककारी तथा विध्वंसात्मक कानुन पनि खारेजीमा परेको थियो। बृहत् शान्ति सम्झौतापछि उक्त कानुनअनुसार चलेका सबै मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णयमा कृष्णप्रसाद हत्याको अनुसन्धानसमेत परेको थियो।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले २०६५ चैत २३ गते कृष्णप्रसाद हत्यासम्बन्धी घटनाको अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गर्‍यो। यसअनुरुप अनुसन्धान अघि बढे पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले खारेज भइसकेको कानुन टेकेर अनुसन्धान बढाउन नमिल्ने रायसहित २०६९ पुस ९ गते मिसिल सुरक्षित राख्न चितवन प्रहरीमा पठाएपछि अनुसन्धान प्रक्रिया रोकियो । बुवा नन्दप्रसाद र आमा गंगामाया छोराको हत्यामा संलग्नमाथि छानबिन र कारबाही माग गर्दै पहिलोचोटि अनशन बसेको त्यसपछि नै हो।
अनशनकै दबाबका कारण राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पुरानो निर्णय सम्झाउँदै २०७० साउन २८ गते सरकारलाई पत्र पठायो। लगत्तै प्रहरीले २०७० भदौ २१ गते मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलअनुसार आरोपितमध्येका रामप्रसाद अधिकारीलाई काठमाडौँको बागबजारबाट पक्राउ गर्‍यो। रामप्रसाद समातिएपछि नन्दप्रसाद र गंगामायाले भदौ २२ गते राति अनशन तोडेका थिए। तर, पक्राउ परेका आरोपितलाई मुद्दा चलाउन यथेष्ट आधार र प्रमाण नभएको भन्दै सरकारी वकिलको निर्देशनमा असोज १६ गते तारेखमा छाडियो।
रामप्रसाद छुटेपछि नन्दप्रसाद र गंगामायाले २०७० कात्तिक ८ बाट फेरि अनशन सुरु गरे। त्यसपछि मङ्सिर २१ मा फेरि अर्का आरोपित ‘अजिब’ भनिने परशुराम पौडेललाई प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो।
अजिबलाई पनि मुद्दा चलाउन प्रमाण नपुग्ने भन्दै सरकारी वकिलको निर्देशनमा पुस १६ मा तारेखमा छाडियो। चितवन प्रहरीले फेरि चैत ६ गते राति आरोपितमध्येका छविलाल पौडेल र भिमसेन पौडेललाई गिरफ्तार गर्‍यो। यसपटक भने सरकारी वकिलले अदालतमा मुद्दा दायर गरे।
२०७० चैत ३० मा चितवन जिल्ला अदालतमा अधिकारी हत्या प्रकरणमा पहिलोपटक मुद्दा दायर भएको थियो। अदालतमा सर्वस्वसहित जन्मकैद माग गर्दै सरकारी वकिल एकनारायण लम्सालले मुद्दा दायर गरेका थिए। किटानी जाहेरीमा नाम नपरेका थप दुई जना गोरखा, फुजेलकी जानुका पौडेल र चितवन रत्ननगरका रुद्र आचार्यविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भयो। प्रहरी अनुसन्धानमा जानुका र रुद्रको संलग्नता देखिएपछि उनीहरूलाई पनि अभियुक्त बनाइएको थियो।
चितवन जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विनोद मोहन आचार्यको इजलासले संलग्न प्रमाणका आधारमा अभियुक्तहरूमाथि सर्वस्वसहित जन्मकैद हुने गरी मुद्दा चलाउन नमिल्ने जिकिर गर्दै त्यो बेला प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएकालाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दियो।
चैत ६ गते समातिएका छविलाल र भिमसेन पौडेल न्यायाधीश आचार्यको आदेशबमोजिम २०७१ वैशाख ४ मा धरौटीमा रिहा भए। भिमसेनलाई २७ हजार र छविलाललाई २० हजार रुपैयाँ धरौटी लिएर तारेखमा छाड्न आदेश दिइएको थियो। यी दुई जना कसुरदार हुन् भनी यकिन गर्न सकिने वा विश्वास गर्न सकिने आधार नभएको हुँदा थुनामा राख्नुपर्ने अवस्था नरहेको न्यायाधीश आचार्यको आदेशमा उल्लेख छ। घटनामा तत्काल प्राप्त हुने प्रमाणको अभाव देखिएको आचार्यको जिकिर छ।
तीन अझै फरार
कृष्णप्रसाद हत्या प्रकरणमा छविलाल, भिमसेन, रामप्रसाद, रुद्र, जानुका र अजिबसँगै सीता अधिकारी, सुभद्रा तिवारी, मेघनाथ पौडेल, कालिप्रसाद पौडेल, हिमलाल अधिकारी पनि अभियुक्त कायम भएका छन्। त्यस्तै अन्य अभियुक्तमा रामप्रसाद अधिकारी नै नाम भएका अर्का व्यक्तिसमेत छन्। विष्णु तिवारीविरुद्ध पनि अभियोग छ।
चितवन जिल्ला अदालतबाट प्राप्त जानकारीअनुसार रुद्र, रामप्रसाद र सुभद्रा तिवारीबाहेक अरू अदालतमा हाजिर भएर धरौटी र साधारण तारेखमा छुटेका छन्। सीता र जानुका पनि साधारण तारेखमै छुटेका हुन्।
नन्दप्रसाद र गंगामायाले अनशन थालेपछि दबाबमा परेको सरकारले अनुसन्धानमा जिल्ला तहको प्रहरीसँगै तत्कालीन डिआइजी गणेश राईको संयोजकत्वमा केन्द्रीय तहमा समेत समिति बनाएको थियो। हत्या अभियोगको मिसिलमा गोली कसले हानेको हो भन्ने किटान गर्ने प्रमाणको अभावमा मुद्दा प्रक्रिया रोकिएको थियो। पछिल्लो अनुसन्धानबाट भने गोली हान्ने रुद्र आचार्यकै पहिचान भएकाले मुद्दा प्रक्रिया अघि बढ्नेमा अनुसन्धानमा खटिएकाहरू आशावादी बनेका थिए।